Forex Archer ထရိတ်ဒင်း နည်းဗျူဟာ
အောက်ပါနည်းဗျူဟာ အင်ဒီကေတာနဲ့ ထရိတ်တာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်. ဒီဟာက ထရိတ်ဒါတွေရဲ့ အသုံးပြုရလွယ်ပြီး လွယ်လွယ်မှတ်မိစေတဲ့ နည်းဗျူဟာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. သင်လည်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်.
ငွေကြေးအတွဲများ - ယူရို/ဒေါ်လာ နှင့် အခြား အဓိကအတွဲများ
အချိန် ၈၆ (EMA86) နှင့် အမြန်ရွေ့လျားနေတဲ့ moving average;
အချိန် ၂၁ (EMA21) နှင့် အမြန်ရွေ့လျားနေတဲ့ moving average
Momentum (ဈေးကွက်လှုပ်ရှားမှုအရှိန်အဟုန်ပြ) အင်ဒီကေတာနှင့်အတူ အချိန်အပိုင်းအခြား ၈ နှင့် level ၁၀၀
Heiken Ashi ဟီကန် အရှီ (ဂျပန်လို ပျမ်းမျှဘား) အင်ဒီကေတာ - candlestick ဖယောင်းယားနှင့်အတူ trend လမ်းကြောင်းကိုသိရန်နဲ့ ဈေးခန့်မှန်းဖို့ရာ အသုံးပြုပါတယ်. သင်မှတ်မိအောင် ကျွန်တော် လိုတိုရှင်းလေး သူ့ရဲ့ အချက်ပေး signal တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်. အခြေခံအားဖြင့် အချက်ပြ signal ၅ ခုရှိပါတယ်. ထိုဟာတွေက အချောင်းအတံရှည်ရှည်မပါဘဲ အတက်လမ်းကြောင်းကိုညွှန်ပြနေတဲ့ (၀ယ်ဖို့အချိန်ကောင်းကိုပြနေတဲ့) အစိမ်းရောင် ဖယောင်းတိုင်၊ အတုံးသေးသေးလေးကို အချောင်းက အပေါ်အောက်ဝန်းယံထားတဲ့ တန်ပြန်သက်ရောက်ပြ (ပြန်တက် သို့ ကျပြသော) အချက်ပေး ဖယောင်းတိုင်၊ အကျ လမ်းကြောင်းကိုပြတဲ့ (သာမာန်အားဖြင့် အရောင်းဖွင့်ဖို့နဲ့ အ၀ယ်ပိတ်ဖို့အတွက်သုံးသော) အနီရောင် ဖယောင်းတိုင်များ၊ အပေါ်ကအချောင်းအတံမပါသော အားကောင်းသော အကျကိုပြတဲ့ အနီရောင် ဖယောင်းတိုင်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်.
Stochastic Oscillator နှင့် ၈-၃-၃ ရွေးခြယ်မှု setting
EMA (21) က EMA (86) ကို အောက်ကနေ အပေါ်သို့ ဖြတ်ကျော်ပါမယ်. EMA 86 ရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ရပါမယ်;
Momentum (ဈေးကွက်လှုပ်ရှားမှုအရှိန်အဟုန်ပြ) အင်ဒီကေတာက level ၁၀၀ အထက်ရှိရမယ်;
Stochastic Oscillator က level ၄၀ အထက်ရှိပြီး သူ့ရဲ့ major အဓိကလိုင်းက အထောက်အပံ့လိုင်းရဲ့ အပေါ်မှာ ရှိရပါမယ်;
Heiken Ashi ဟီကန် အရှီ က အစီမ်းရောင် ဖယောင်းတိုင်ဖြစ်ရပါမယ်;
အထက်ပါ အချက်ပေး signal တွေဟာ တချိန်တည်းမှာ ဖြစ်ပေါ်ရပါမယ်;
ထရိတ်ကို နောက်ဖယောင်းတိုင်တစ်ခုရဲ့ အဖွင့်ကနေ စဖွင့်သင့်ပါတယ်;
Stop-loss = 50 pips မှာထားပါ;
Take-profit = 100 pip မှာထားပါ.
EMA (21) က EMA (86) ကို အပေါ်ကနေ အောက်သို့ ဖြတ်ကျော်ပါမယ်. EMA 86 ရဲ့အပေါ်မှာဖြစ်ရပါမယ်;
Momentum (ဈေးကွက်လှုပ်ရှားမှုအရှိန်အဟုန်ပြ) အင်ဒီကေတာက level ၁၀၀ အောက်ရှိရမယ်;
Stochastic Oscillator က level ၈၀ အောက်ရှိပြီး သူ့ရဲ့ major အဓိကလိုင်းက အထောက်အပံ့လိုင်းရဲ့ အောက်မှာ ရှိရပါမယ်;
Heiken Ashi ဟီကန် အရှီ က အနီရောင် ဖယောင်းတိုင်ဖြစ်ရပါမယ်;